Tattoo tattoos: naqshad ugu qurxoon | Tattoo
Tattoo tattoos: naqshad dib u habeyn ah
Duubabka xaraashka waxay leeyihiin naqshad gaar ah, maaddaama ay isku dareyso sawirka xardho iyo jajab qoraal ah.
Haddii aad rabto ogaado sirta kuwan xaraashka dib u noqo, Waxaan ku aragnaa iyaga hoosta!
1 Astaamaha qoraalka iyo waraaqda
2 Waxyaabaha maskaxda lagu hayo nooca noocan oo kale ah
Astaamaha qoraalka iyo waraaqda
Tattoo-yada aan ka helno duubabka waxaa badanaa lagu kala soocaa iyadoo leh qayb ka mid ah qoraalka qoraalka (ama noocyo kale oo fariimo ah, sida hieroglyphs) oo qofka sawirka qaadayaa doonayo inuu istaago. Sidaa darteed, in kasta oo warqaddu ay tahay cunsur muhiim ah, haddana waa inay si buuxda ula jaanqaaddaa qoraalka ay ku jirto. Taasi waa, in aanad hadhin ama ku istaagin cabirkeeda saxda ah.
Qaybta kale ee weyn ee noocan ah waraaqaha, qoraalka, ayaa lagu kala soocay iyada oo leh ugu yaraan halista. In kasta oo aan ka heli doonno wax kasta oo noloshan ah, waxay u badan tahay inaan helno qoraal muhiim u ah qofka leh sawirka (tusaale ahaan, "carpe diem" ama jajab ka mid ah buugga uu jecel yahay) marka loo eego qoraal ku qoran "doqon yaa aqriyay".
Waxyaabaha maskaxda lagu hayo nooca noocan oo kale ah
Markaad dooranayso duubista tatooyada waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad haysato talooyin taxane ah tixgeli:
Way kafiican tahay hadaanay warqaduhu aysan aad ugu cuslayn qoraalka ama midabada. Si ka fudud oo ballaadhan, ayaa inbadan naqshadayntu "neefsanaysaa".
Ku sii wadida naqshadeynta: waxaad isku dari kartaa waraaqda yar iyo waxyaabaha kale (ubaxyo, shumacyo, xayawaan ...) laakiin isku day inaad canaasiirta is waafajiso oo aanad midba midka kale ku istaagin.
Doorashada font sidoo kale waa farshaxan. In kasta oo aan lagaa rabin inaad isticmaasho noocyada qarniyadii dhexe sida gothic, iska ilaali inaad isticmaasho aberrations casri ah sida majaajillada sans.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, hubi in qoraalka uusan kujirin qalad higaad ah.
Waxaan rajeyneynaa inaad kaheshay duubabka sawirka mid xiiso leh iyo in tilmaamahan ay kaa caawin doonaan qaabeyntaada xigta. Noo sheeg, ma leedahay tattoo sidan oo kale ah? Noo soo sheeg faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Tattoo tattoos: naqshad dib u habeyn ah
Tattoo-dhaqameed cusub, si qoto dheer u ogaado qaabkan cajiibka ah